SERP anio: fijerena maso ny boaty, karatra, snippet manankarena ary takelaka | Martech Zone
SERP anio: fijerena maso ny boaty, karatra, snippet manankarena ary takelaka Google
Valo taona izao izay no nanosika ny mpanjifako ampidiro sombin-javatra manan-karena ao amin'ny fivarotana, tranokala ary bilaogin'izy ireo an-tserasera. Ny pejy valin'ny motera fikarohana Google dia nanjary pejy velona, ​​miaina, mavitrika ary natao ho anao manokana hahitanao ny fampahalalana ilainao… noho ny fanatsarana bebe kokoa an-dry zareo tamin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana tamin'ny alàlan'ny angon-drakitra voarafitra nomen'ny mpanonta.
Ireto fanatsarana ireto dia misy:
Vata famaliana mivantana miaraka amin'ny valiny fohy, eo no ho eo, lisitra, carousels, na latabatra izay mety misy sary koa hanatsarana azy ireo.
Snippets manan-karena nomen'ny tranonkala hanatsarana ny fidirana pejin'ny valin'ny motera misy ny vidiny, naoty, misy, sns.
Karatra manankarena ho an'ny mpampiasa finday namana.
Kisary fahalalana eo amin'ny sisiny ankavanan'ny SERP izay manome sary sy fampahalalana voafantina momba ny fikarohana.
Panels fahalalana eo amin'ny sisiny ankavanan'ny SERP izay manome sary voatahiry, fampahalalana, sarintany ary lahatahiry izay miavaka amin'ny marika na orinasa.
Kitapo eo an-toerana (na Kitapo fonosana) no fototry ny valin'ny fikarohana eo an-toerana miaraka amin'ny fampahalalana momba ny orinasa, hevitra ary sarintany. Ireo dia tarihan'ny hetsika Google My Business miaraka amin'ny fanavaozana sy ny fanamarihana marika.
Manontany koa ny olona manomeza fanontaniana sy valiny mifandraika amin'ny fangatahana.
Kitapo sary dia carousel marindrano amin'ireo fangatahana lasibatra amin'ny fahitana.
Rohy amin'ny tranokala dia lisitr'ireo rohy manan-danja ao anatin'ny tranonkala malaza. Mety tafiditra ao koa ny sahan'ny fikarohana ao an-tranonkala izay miavaka amin'ny mekanisma fikarohana anatiny ao amin'ilay tranonkala.
Twitter carousel dia mampiseho ny lisitr'ireo bitsika farany avy amin'ny kaonty twitter.
Vaovao Boaty dia carousel mampihetsi-po amin'ny fotoana mamaky vaovao sy ny tantara avo lenta hita ao amin'ny tranokalam-baovao fantatra.
Amin'ny alàlan'ny fandrafetana ny angon-drakitrao sy ny fanarahana ny fenitry ny Schema, ny marika iray dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fahitan'izy ireo ao anatin'ireto endri-javatra mahasarika ireto ao amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana - indrindra raha ny fanatsarana ny valiny nomeny manokana ao amin'ilay pejy amin'ny alàlan'ny sombin-javatra manan-karena.
Misy adihevitra ratsy momba an'io koa… azon'ny Google atao mitazona ireo mpampiasa ao amin'ny pejy valin'ny motera fikarohana fa tsy ento any amin'ny pejy itodiana izy ireo. Raha azon'izy ireo atao ny mitazona ny mpampiasa any dia mety hanindry ny doka, ny mofo sy dibera an'i Google izy ireo. Saingy… manana ny mpihaino fikarohana i Google, noho izany matahotra aho sao hilalao ny lalaon'izy ireo. Antenaina fa rehefa mitondra ny valin'ny motera fikarohana amin'ny tranokalanao ianao, dia miasa tsara amin'ny fampidirana sy fakana ny mombamomba ny mpitsidika anao hahafahanao manangana fifandraisana mivantana.
Google dia tsy milaza fotsiny fa ny fanomezana an'ity data meta ity dia mety hiteraka fampisehoana optimum amin'ny SERP iray, izy ireo koa dia manazava tsara fa ny sombin-tsoratra manan-karena dia afaka manatsara ny fahitana ny motera fikarohana ankapobeny satria mampianatra ny algorithman'izy ireo amin'ny fampahalalana ao anaty pejy.
Raha tsy manararaotra ny orinasanao, ny mpivarotra anao ary ny atiny snippets manankarena, ianao dia ho tavela any anaty loto ataon'ny mpifaninana manao izany. Raha tsy miantsoantso anao ny masoivohonao mba hampihatra azy ireo - mila mitady orinasa vaovao ianao. Ary raha manana fotodrafitrasa manana na taloha ianao izay tsy manohana azy ireo dia mila mifindra monina na mamorona vahaolana mahomby. Ny sombin-javatra manan-karena dia tsy vitan'ny fanatsarana ny fikarohana fa misy fiatraikany amin'ny taha-tsindry mihoatra ny noeritreretina ihany koa.
Ity infographic avy amin'ny Brafton, Torolàlana hita maso amin'ny endri-javatra SERP Google rehetra: Snippets, Panels, doka misy karama sy maro hafa, manome topy maso ny fomba fijerin'ny sombin-karena be dia be sy ny angona voarafitra ao amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana.
Tags: microdataMicroformatssnippets manankarenatetikaschema markuppejy valin'ny motera fikarohanaserpDiarin'ny rindrinawsj
Mandeha miadana ny fampiantranoana WordPress? Mifindra amin'ny fampiantranoana tantanana
Mar 19, 2012 amin'ny 9: 25 AM
Amin'ny maha-fitsipika ahy dia tsy mpankafy ny infografika aho, saingy tsy maintsy milaza aho fa ity iray ity dia vita tsara ary manao asa tsara amin'ny fanazavana sombintsombiny manankarena - indrindra momba ny fomba hanatsarana ny CTR sy ny fiovam-po.
Mar 19, 2012 ao amin'ny 12: PM PM
Ekena, Jeff! Nanao asa lehibe izy ireo.